Available Available - Naqshad si loo bedelo UTM Isku-duwaha Isku-duwaha Juqraafiga - Gofumed
Available Available - Template si loo bedelo UTM isku-duwaha si Geographic
Ogast, 2017 Cartografia, Featured
Post Previous«Previous Fursadaha badan ee loo adeegsan karo isticmaalka Web GIS hadda
Post Next Shaqaaleynta loo jeedo GIS. Qosol iyo xaqiiqda Next »
21 Waxay u Jawaabtaa "Available Free - Template si loogu bedelo UTM Isku-duwaha isuduwayaasha juqraafi"
Xayeysiintaas ayaa dhacday. Si kastaba ha noqotee, waxaan kuu soo diray xiriir sax ah oo ku saabsan emaylkaaga.
Download link ayaa dhacay
mo isagu wuxuu leeyahay:
Jeermiska geofumadas, wuxuu kuugu talagalay inaad dibadda u soo baxdo!
Qaabka loo helo shaxanka ayaa ah in la iska diwaangaliyo iyadoo la adeegsanayo foomka, ka dib la hubiyo rukumada la socota emaylka imanaya. Waxay isla markaaba kuu dirtaa isku xirka qaab muusig.
Haddii aadan arkin boostada, buuxi foomka markale, raacna tilmaamaha.
buuxi foomka oo xaqiiji emailkaaga
Zoraida Leal G. isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waxaan xiiseynayaa helitaanka macluumaadka, waxaan qabaa inay aad u caawineyso. waad ku mahadsan tahay wax badan
Waxaan jeclaan lahaa inaan xaqiijiyo rukumadayda, waxaanna ka helayaa template a geográficas. Waad ku mahadsantahay aad iyo aad ugu hambalyeyneyso shaqada
Gustavo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan kugula talinayaa qalab aad ku beddesho xogta dukaannada ku yaal Buugga Goobta oo loo beddelo AutoCad. Waxaan ku lifaaqay xogta bilowga.
Sawirada isku dhafan 1
Waad ku mahadsantahay aad u sii horeysay
Waqtigaan ka hor waxaan caawinay dhibaatooyin kale oo ah Excel si aan ugu beddelno Google Earth, gaarista hadafkayaga ay na waydiisteen, waxaan ugu mahad celineynaa wax walba.
Hello, waxay u fiicnaan laheyd inaad hesho dhalidda, aad ayaad ugu mahadsan tahay
Francisco isagu wuxuu leeyahay:
Si dhakhso ah u arag
Álvaro Ramírez Laguna isagu wuxuu leeyahay:
Hello waxaan mar labaad ku soo biirayaa, laakiin ma helayo emailka xaqiijinta, waxaan horeyba u sameeyey laba emails oo kala duwan oo aan hubiyey faylka spamka iyo waxba, fadlan ma wadaagi kartaa template? Waxaan sugayaa fikradahaaga.
Marka aad is-qorto, iskuxirku wuxuu soo galayaa boosteejo.
Jose Santos isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN U BAAHAN TAHAY MUUQAALKA KA QAYBGALAANSHAHA SHAQADA
Eeg emailkaaga, oo ay ku jiraan spam.
Waan isdiiwaangaliyay laakiin ma aanan helin shaxanka.
Ku soo celi foomka waxaadna ku heli doontaa shaashadda emailkaaga.
Waxaan jeclaan lahaa in la helo qaab-dhismeedka
Waxaan cusbooneysiinaynaa oo aan u guurineynaa liiska macaamiisheena, sidaa darteed haddii horeyba laguu rukumay, waxaan kaa dooneynaa inaad xaqiijiso. Markaad sidaa sameysid waxaad heli doontaa shaxanka.
Pedro Calas isagu wuxuu leeyahay:
Aad u mahadsantahay
Jorge Viloria isagu wuxuu leeyahay:
Wanaagsan iyo kuwa hore u diiwaangashan ayaa sidoo kale heli doona.